Orinasa mandanjalanja - Mpanamboatra milanja China
Ny lanjan'ny kalibration OIML CLASS E1 endrika varingarina, vy tsy misy fangarony
Ny lanjan'ny E1 dia azo ampiasaina ho fari-pitsipika mifehy amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny lanjan'ny E2, F1, F2 sns, ary mety amin'ny fampanjariana ny mizana avo lenta an-tsoratra sy ny famaritana avo lenta ihany koa. Zavamaniry, ozinina mizana, sns
Ny lanjan'ny fikajiana OIML CLASS F1 cylindrical, vy tsy voadio
Ny lanjan'ny F1 dia azo ampiasaina ho toy ny fenitra amin'ny fanamafisana ny lanjan'ny F2, M1 sns, ary mety amin'ny fanaovana kalandrie ny mizana fandrefesana avo lenta sy avo lenta. Ny fikajiana ihany koa ho an'ny mizana, mizana na vokatra mavesatra hafa avy amin'ny ozinina fanafody, ozinina mizana, sns
Ny lanjan'ny fikajiana OIML CLASS M1 cylindrical, vy vita amin'ny vy
Ny lanjan'ny M1 dia azo ampiasaina ho fari-pitsipika mifehy amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny lanjan'ny M2, M3 sns koa ny fikajiana ny mizana, ny mizana na ny vokatra milanja hafa avy amin'ny laboratoara, ozinina fanafody, ozinina mizana, fitaovam-pampianarana any an-tsekoly sns.
Ny lanjan'ny fikajiana OIML CLASS F2 cylindrical, vy marevaka
Ny lanjan'ny F2 dia azo ampiasaina ho fenon'ny referansa amin'ny fanamafisana ny lanjan'ny M1, M2 sns koa ny fikajiana ny mizana, ny mizana na ny vokatra milanja hafa avy amin'ny ozinina fanafody, ozinina mizana, sns
Ny lanjan'ny fikajiana OIML CLASS E2 cylindrical, vy vita amin'ny vy
Ny lanjan'ny E2 dia azo ampiasaina ho fari-pitsipika mifehy amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny lanjan'ny F1, F2 sns, ary mety amin'ny fampanjariana ny mizana avo lenta an-tsoratra sy ny famaritana avo lenta ihany koa. Orinasa, sns
Ny lanjan'ny calibration ASTM dia 500g hatramin'ny 50kg endrika mahitsizoro
Ny lanjany rehetra dia vita amin'ny vy vy tsy misy fangarony mba hahatonga azy ireo tsy ho harafesina.
Ny lanjan'ny monobloc dia natao manokana ho an'ny fitoniana maharitra, ary ny lanjany miaraka amin'ny lavaka manitsy dia manome vola be indrindra.
Ny famolahana electrolytic dia manome antoka ny endrika manjelanjelatra ho an'ny vokatra fanoherana ny adhesion.
Ny lanjan'ny ASTM 1 kg -5kg dia omena amin'ny boaty aliminioma misy patetika miaraka amina polyethylene foam miaro SY
Ny endrika boribory ASTM milanja dia ahitsy mba hahatratra ny kilasy 0, kilasy 1, kilasy 2, kilasy 3, kilasy 4, kilasy 5, kilasy 6, kilasy 7.
Boaty aliminioma namboarina tamin'ny fomba miaro tena tsara miaraka amin'ny mpiboboka izay hiarovana ny lanjany amin'ny fomba hentitra.
Ny lanjan'ny CAST-IRON M1 mavesatra mavesatra 500kg ka hatramin'ny 5000 kg (Volavola mihodina)
Ny lanjan'ny fikajiana vy anay dia mifanaraka amin'ny fitsipika napetraky ny International Organization of Legal Metrology and ASTM norms for Class M1 to M3 cast -iron's weight.
Rehefa takiana fanamarinana tsy miankina dia azo omena amin'ny alàlan'ny fankatoavana.
Ny lanja bara na tanana dia omena vita amin'ny Matt Black Etch Primer avo lenta ary namboarina tamin'ny fandeferana isan-karazany izay azonao jerena ao amin'ny tabilaonay.
Ny lanjan'ny tanana dia omena vita amin'ny Matt Black Etch Primer avo lenta sy ny lanjan'ny r
Ny lanjan'ny kalitaon'ny ASTM dia napetraka (1 mg-1 kg) endrika varingarina
ASTM SS fampiasam-bola fampihenana / very savoka fanariana karazana fitsapana mavesatra mahitsizoro endrika 500g hatramin'ny 20kg
Slavy CAST-IRON M1 milanja 1 g ka hatramin'ny 50 kg
Ny lanjan'ny kalitaon'ny ASTM dia miorina (1 mg-2 kg) endrika varingarina
ASTM stainless steel Knob manitsy ny fanandramana fanitsiana 1g-20kg
Ny lanjan'ny fikajiana ho an'ny mizana nomerika, Lanja voamarina, Ny lanjan'ny fikajiana ny refy, Calibration lanjan'ny napetraka, Shear Beam Load Cell, Calibration Mass,